Chigadzirwa Kushambadzira: Iyo Anatomy yeiyo Unboxing Chiitiko | Martech Zone
Svondo, Zvita 24, 2017 Douglas Karr
Vamwe venyu vanogona kutenderedza maziso enyu pane izvi, asi kekutanga nguva pandakaona zvinoshamisa chigadzirwa kurongedza ndipo pakaita shamwari yakanaka paakatenga AppleTV kwandiri. Yaive yekutanga Apple chishandiso chandati ndambogamuchira uye chiitiko chingangodaro chakanditungamira kune gumi nemaviri zvigadzirwa zveApple zvandinazvo izvozvi. Chimwe chezviitiko zvinoshamisa zveunboxing yaive yangu yekutanga MacBook Pro. Bhokisi rakanga rakanyatso kukwana uye iyo MacBook yakamiswa zvakakwana paunenge uchidzosera kumashure kurongedza kuti urione. Chaitaridzika uye chakanzwa chakakosha… zvekuti ndinotarisira kuwana MacBook Pro nyowani makore mashoma apfuura (ndanonoka izvozvi).
Pikisa izvi kune laptop yandakatenga gore rapfuura. Yakanga isiri isingadhuri Windows Laptop asi ndakashamisika zvisingaite pavakaburitsa. Yaive yakarongedzwa mune yakajeka brown kadhibhodhi uye iyo Powerupply yakanga yakaputirwa muhombodo uye ndokukandirwa mune chena, yakatetepa, bepa bhokisi. Ipo iyo laptop yaive yakanaka, iyo unboxing haina kusiya chinhu kune fungidziro. Kwaive kutodza moyo. Zvakaipisisa, zvakaita kuti ndinetseke kuti kambani iri kuseri kweiyo laptop yaive ichitsvaga kundifadza here kana kungo chengeta mashoma emari pakurongedza.
Vatengi nhasi vanyururwa kubva pachiitiko chekutenga uye vari kuenda kure kure nekugutsikana iko kwavakambonzwa pakutenga muchitoro. Ichi chikonzero nei kutarisa kunzvimbo dzasara dzekuratidzwa kwechiratidzo chako kune vatengi kunofanirwa kukosheswa. Kugadzirisa chiitiko chisina kubhowa hakufanirwe kufuratirwa kana uchifunga zvazvinoita mukugutsikana kwevatengi kwese. Jake Rheude, Red Stag Kuzadzikiswa
Isu takagadzira mashoma anoisa kune vatengi vedu kuti vaise pamwe neecommerce yavo zvigadzirwa pamusoro pemakore. Imwe yaive yakapfava yekutenda-kadhi riine trackable dhisikaundi iyo inotungamira kune zvirinani kuchengetwa. Imwe yaive kadhi-yekugovana kadhi yaive neakaundi ese emakambani maakaundi pairi uye hashtag yekugovana pikicha yeodha online. Chero nguva mutengi paakagovana odha yavo, kambani yaigovana kuburikidza nevezvenhau. Yakanga iri nzira huru yekuziva vatengi vavo online pamwe nekuwana kugovana munharaunda kukwezva vatengi vatsva.
Ndiyo imwe yenzvimbo dzekutarisa izvo Red Stag Kuzadzikiswa akagovana seyakanakisa maitiro mune yavo infographic, Anatomy yeiyo Yakakwana Unboxing Chiitiko. Nyanzvi dzakaongorora izvo zvinogadzira zvakanyanya kusangana nevatengi, kusanganisira:
Bhokisi - iro rekunze bhokisi dhizaini, kurongedza tepi, uye bhokisi remukati.
Zadza uye Kurongedza Chinyorwa - yakashongedzwa tishu mapepa, crinkle bepa, uye zvakagadzirirwa kurongedza zvinhu.
Purogiramu yeMagetsi - kujekesa chikuru chigadzirwa uye kuviga zvishandiso uye zvinyorwa.
Kuenda Pamusoro nekupfuura - kupa muyedzo yemahara, kusanganisira yekudzosera chitaridzi, nekusimudzira kugovana munharaunda.
Kukosha kwekuisa - wedzera chinyorwa chakasarudzika, uye zvekushambadzira izvo zvinoshambadza zvimwe zvinogadzirwa uye kukwidziridzwa.
Iyo infographic tsananguro yega yega uye inopa rairo rekuwedzera pane zvakajairika misungo, kusanganisira akawandisa-saizi mabhokisi, furo nzungu, akaomarara kurongedza, uye isina kusimba tepi
Tags: kuzadzikachigadzirwa ruzivokushambadzira kwechigadzirwaRed Stag Kuzadzikiswaunboxing